Ngaphambi kokuqala umsebenzi elihlobene ne kokuphothula evele of izakhiwo ezakhiwa ngokhonkolo, zidinga kubo primed okuyiwona zisebenzisa izinhlobo ezahlukene primer.
Primer for ukhonkolo kanye ukhonkolo: Injongo
Injongo eyinhloko ngokusebenzisa primer - beqinisa isisekelo, kanye nokuvikelwa yayo ukuze simelane namathonya ezihlukahlukene negative ozungeze umhlaba wethu. Izindleko zalesi impahla uphansi, naphezu kweqiniso lokuthi ke inomsebenzi omkhulu.
Izinzuzo usebenzisa primer
Ngakolunye uhlangothi inhlabathi impahla, ngokusho umbiko lomsebenzisi, yilezi ezilandelayo:
iphathwa ebusweni izakhiwo zihlala zinjalo;
isizinda ukuphila enwetshiwe;
phakathi base ukulungisa nezinto zokwakha kokuqeda awashintsheki ngokuqinile;
primer ngoba ukhonkolo wenza umsebenzi i yisivikelo, esinciphisa kungenzeka ixhumana nomunye izinto ezingafanele.
Izikhombo: izinhlobo ezithile kwenziwa bangaqashwa indaba okuzoba efanelekayo esigabeni sokugcina kule yokuqedela ezishelelayo.
Ebusweni, elalisetshenziswa lapho obuphathekayo izinga elifanele, libhekene isakhiwo esihle, lapho futhi uhluke olubushelelezi ekahle (isib, iphansi eyenziwe enezisekelo zikakhonkolo nezindlu prefabricated). Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi ngesisekelo glue okunjalo futhi putty nje musa ukubamba bamba, basuke kahle ibekwe.
wallpaper ngokushesha baqala ukuza unstuck;
flaking usimende echayeke;
Uma sekugcineni Kwenziwa ngochwepheshe onekhono kakhulu, ngisho ngaphambi kokuqala umsebenzi wokulungisa zinikeza izici ezishelelayo.
Uma sekugcineni ubudala has inqwaba izinhlobo ezihlukene zomonakalo, kusho ukuthi izindonga kungukuthi ngaphansi ukwelashwa ezidingekayo ngaphandle msebenzi wokulungiselela wokulungiselela kwenziwa, okubandakanya ebusweni yokuhlanza kanye priming ku ukhonkolo.
Izigaba ukuvundulula yokuhlanza kanye priming
1. Ngaphambi primer isicelo ku substrate, Kunconywa kanje siqu ecacile yalo kusukela enamathela odlule okuyinto cishe ezingadingekile uthuli zanqwabelana.
2. Zonke ukukhubazeka ekhona (imifantu, maholoholo) phezu kumelwe iqedwe ngokuphelele.
3. Okulandelayo, ku substrate ukuba camera , ezijulile Ukungena primer ngoba ukhonkolo, ozokusiza ukuqinisa izindawo ezilimele.
4. Ngemva kokuphothulwa izinyathelo ezingenhla kumele angabekwa isizinda.
Ngaphambi ekuqaleni yokudweba izindonga bona zikhuthazwa ukuba nazo ukulungiselela. Iphinde isebenzisa ezijulile angena primer ngoba ukhonkolo.
Izincomo: ukuvikela ebusweni nezilwanyana ezincane abangela umonakalo kufanele sisebenzise primer equkethe ingxenye isinqandakuvunda. It is lisetshenziswe ukucutshungulwa izindonga zangaphandle zezakhiwo, kanye ezindaweni okusezingeni eliphezulu umswakama ezingeni.
Lapho isetshenziswa impahla ofuna ukusebenzisa ibhulashi noma shayela.
Futhi, ungakhohlwa mayelana esebenzisa imihlahlandlela ukusetshenziswa, olutholakalayo ku iphakethe:
Ngenxa izakhiwo zabo we ebusweni akakwazi ukuncela inani primer, umthamo okhethiwe. Indaba ngokweqile umane wome, ngaphandle ngokuletha inzuzo.
Uma wenza isicelo primer ingaphansi inani elidingekayo ke lokhu ngeke kube yikuphi ukusetshenziswa, ngenxa yokuthi ayikwazi ukungena ngaphakathi isizinda, ngokulandelana, ngeke ukwazi uphold it.
Isincomo: Ngaphambi zisebenza primer kufanele siqede umsebenzi emhlabathini izindonga.
Material senzelwe ekwelapheni evele zangaphakathi nezangaphandle. Primer for ukhonkolo ingaphandle ne impumelelo efanayo ingasetshenziswa Interiors. Nokho, ngenxa yokuthi ukwakheka kuhlanganisa izingxenye okuyizinto ezingaba yingozi umgudu wokuphefumula emva ukusetshenziswa kwalo kuyadingeka ukuze pholisa kahle egumbini.
Kukhona izinhlobo ezilandelayo:
Primer for ukhonkolo gcizelela, anokungena ezijulile.
Ngomala kabani Ukwakheka kuhlanganisa fillers. Zifakwe ngesikhathi okwalandela handling evele (isib, primer acrylic for ukhonkolo).
Ukuba Wedwa. Ivikela isivikelo emathonyeni emibi izimo zezulu, amakhemikhali, umthelela mechanical (lokhu kufaka abicah, polyurethane kanye epoxy primer ngoba ukhonkolo).
Kwenziwa ngokuqukethwe antiseptics: ukuvikela kusuka mkhuba futhi isikhutha.
Kuye uhlobo ebusweni kwenziwa zihlukaniswe zibe:
Kwenziwa eklanyelwe ezibushelelezi (benza umsebenzi ukuvikelwa umswakama asetshenziselwa imidwebo noma kakhonkolo).
Kwenziwa eyenzelwe Concretes yeselula (libhekene ubunzima ezinhle, ziqukethe fillers silicate okuhloswe ukugcwalisa ezimbotsheni). Basuke ugxile kahle, kodwa kahle baqinise ukhonkolo.
Imiyalo iphakethe wabonisa lokho kwaziswa ukuze a ebusweni primer yakhelwe ukhonkolo - ukusetshenziswa ongaphandle noma lwangaphakathi.
Lapho ekhetha inhlabathi:
1. Kubalulekile ukukhomba, odinga Ukwakheka (i-surface belungiselela imidwebo noma abaluphahleka, ungangenisi amanzi).
2. Qaphela noma iyiphi impahla kuyisisekelo (ukhonkolo fresh noma ubudala, obukhulu lapho noma yeselula). Ngenxa yalokho, futhi kufanele ukhethe primer ezinezici ezifanele.
3. Kuyadingeka ukubala ukusetshenziswa primer.
Izincomo: kumelwe kukhunjulwe ukuthi indlela yokwakheka akakwazi yokuqinisa ukhonkolo, ngoba akufanele ukungezwa isixazululo.
Ubuningi Ukungena ukujula elilingana 70 mm, lapho embhedeni unogada wadala. Le nto, like bumper uthatha zonke hit, enza umsebenzi ukuvikela base.
Foundation abebenokwenziwa ukugcina izakhiwo zabo isikhathi eside kakhulu futhi kangcono. Kodwa uma le nto ukungezwa ikhambi, awusebenzi uzwe namandla ngaphandle kokusebenzisa eziklanyelwe ngenhloso lezi izithasiselo.
Izincomo: ukusetshenziswa ngabantu abaphucwa inhlabathi ukwakheka ukhonkolo kunganciphisa izici amandla.
Ukuze ikhambi ingezwe izingxenye ukhonkolo ekhethekile ekwazi baqinise amandla awo, kubalulekile ukuba ube ukwakhiwa noma ekhethekile ubunjiniyela ngemuva.
Priming evele sasakhiwe ngokhonkolo, ebavumela ukuba usetshenziselwe okwalandela imisebenzi yokuqedela, kanye neqhaza oluqinisayo zabo, zivikela isikhutha. Ngaphambi kokuthenga impahla edingekayo ezidingekayo ukuthola isakhiwo isizinda azosiza asilungise ngendlela engcono.
Primer wentengo ukhonkolo ruble 450, - eliphezulu futhi impahla imvelo ngaphandle iphunga othize. Kwasetshenziswa ezikhundleni ezehlukene futhi emaphaketheni ezahlukene.
Ukuhambisana izindonga nge amaphrofayli majachnyh
Siyaqhubeka isihloko ukhetho amaziko emakhaya kanye Cottages.
Imishayo podstropilnye: amafomu, cross-isitshalo. Podstropilnaya ipulazi
Ukwakheka banana futhi izakhiwo zalo nenzuzo